Tokyo Institute of Technology - Chidzidzo ouinjiniya muJapan
nyika : Japani
guta : Tokyo
inotangwa : 1881
Musakanganwa kuti kurukura Tokyo Institute of Technology
Kunyoresa pana Tokyo Institute of Technology
Tokyo Tech ndiye pamusoro National payunivhesiti zvesainzi muJapan aine nhoroondo zvakatevedzana kupfuura 130 makore. Pakati anenge 10,000 vadzidzi Ookayama, Suzukakedai, uye Tamachi pazvikoro, hafu vari dhigirii chirongwa chavo tsvimborume nepo imwe hafu vari tenzi uye dhigirii doctorate zvirongwa. vadzidzi International nhamba 1,200. Pane 1,200 fakaroti uye 600 administrative zvekushandisa vepachikoro.
Muzana remakore rechi21, basa zvesainzi mumayunivhesiti kuramba kukosha. Tokyo Tech anopfuurira kuva vatungamiriri pose muminda zvesainzi, uye zvinoita kuti upenyu nzanga kuburikidza tsvakurudzo wayo, Kuisa pfungwa mhinduro pose nyaya. The Institute chinangwa-yakareba ndiko kuva kutungamirira yunivhesiti munyika zvesainzi.
Somumwe muJapan pamusoro mumayunivhesiti, Tokyo Institute of Technology anotsvaka kupa yebudiriro, runyararo uye kubudirira munyika, uye anokanda kutanga yose yevanhu nezvaanogona ndima zvakaisvonaka kuburikidza kupayona pakutsvakurudza uye dzidzo mune zvesainzi, kusanganisira mumabasa okugadzira nemagariro utariri. Kuti uite izvi basa, tine ziso kudzidzisa vadzidzi zvikuru tsika kuwana kwete chete unyanzvi yesayenzi asiwo unyanzvi ari akarurama hwemashiripiti, uye pakati nepakati ruzivo sayenzi magariro uye nevanhu, zvose apo kutsvakurudzwa zvakadzama kubva zvinokosha kuita pamwe dzingaparwe ugone. Kuburikidza zvinhu izvi, tinoda kupa pose kuenderera zvakasikwa uye kutsigirwa upenyu hwevanhu.
School of Bioscience uye hwokushandura zvinhu zvipenyu
Graduate School of Science uye Engineering
Graduate School of Bioscience uye hwokushandura zvinhu zvipenyu
Interdisciplinary Graduate School of Science uye Engineering
Graduate School of Information Science uye Engineering
Mukutanga Meiji nguva, nokukurumidza pashure Panovhurwa nyika, zvakava Zvinokosha kuti Japan kukudziridza evanhu zvinhu kuva ano Industrial rwokugadzira. Hurumende yakanga vachishingaira kutsigira hwokugadzira dzidzo vemo panguva ino kuti kukudziridza yepamusoro zvesainzi kuti akanga atova chinowanzoitwa Europe uye United States. Against ichi kumashure, MuJapan National hwokugadzira chikoro chokutanga, ari Kogakuryo Technical School, yakavambwa neShumiro Engineering muna 1873.
Around iyoyowo, Bazi Education akavamba Seisakugaku Kyojo muna 1874 panguva pfungwa Gottfried Wagener, musayendisiti wokuGermany-kuzvarwa. Wagener akanga Vocal pamusoro kudiwa hunobatsira michina dzidzo muJapan kuti kukudziridza mukuru mainjiniya uye mainjiniya. Kunyange zvazvo Seisakugaku Kyojo avhara makore matatu gare gare, zvakanga chikoro echimurenga pakuti vadzidzi vaidzidziswa unyanzvi hunobatsira pamwe nesayenzi dzidziso kubudisa mainjiniya zvakafanira kuti modernizing Japanese indasitiri.
Seiichi Tejima, uyo akanga mutevedzeri mukuru mukuru Museum of Education, pamwechete Wagener akasunda nokuda ano hwokugadzira uye maindasitiri dzidzo pamwe kumikidzo hunobatsira mafomu. Achitsigirwa RYUICHI Kuki uye Arata Hamao Ushumiri of Education, vakwanisa kugombedzera Muushumiri kusimbisa Tokyo yekosi School muna May 1881.
Kugadzirira avhure chikoro akatanga. A kwakarongwa yakatangwa maererano mitemo nemirayiro yose Tokyo yekosi School wakadzikwa muna 1881. Mitemo iyi waiti wechikoro anofanira kupa anodiwa dzidzo hwokugadzira uye maindasitiri nesayenzi kuva mudzidzisi yekosi chikoro kana mukuru injiniya. Kuramae muna Taito City pedyo Sumida River akasarudzwa sezvo nzvimbo nokuda pazvivako. Kuramae zvinorevadura mberi uye zita rinobva mupunga pamatura Tokugawa Shogunate yaiva ikoko.
Taizo Masaki aiva wechikoro wokutanga uye makirasi okutanga dzaiitwa 1882 mumadhipatimendi maviri: weDhipatimendi Machinery uye weDhipatimendi Zvakarurama Chemistry. The Tokyo yekosi School kudzidza kirasi yacho yokutanga muna July 1887. Pakutanga muchikoro akaomerwa arirwise vadzidzi, nokuti michina unyanzvi vakanga rakagara richidudzirwa Tsuro kuJapan ari kudzidzira basa mugadziriro. The kuchinja kubva kudzidzira basa kuti ano hwokugadzira dzidzo akanga achangobva chete atanga. mu 1884, Wagener akatanga kudzidzisa pachikoro maererano nenheyo uye nzira yaimbova Seisakugaku Kyojo. Akava yazvino nokuda huru dzinotambudza kurimwa munyika kugadzira mumaindasitiri zvakadai Ceramics, girazi, uye lacquerware. Wagener zvakapa hwaro Tokyo Tech kwakazoitwa mberi sezvo maindasitiri mukugadzira dzaimera muJapan.
mu 1890, Seiichi Tejima akatora pamusoro Masaki kuti basa uye akava wechikoro. Tejima akanga aenda kuUnited States kudzidza paaiva 21 makore aiva muturikiri ari Iwakura Mission, munhu Japanese nedzenyu basa kuti akafamba munyika yose. Gare gare vaifungidzira basa mutevedzeri mukuru mukuru Museum of Education akaenda Paris uye Philadelphia World nezvavaitsanangura. Kubva Zviitiko izvi Tejima akava mutsigiri piyona chebasa dzidzo muJapan. The Tokyo yekosi School Yakazopiwa zita rokuti Tokyo Technical School muna 1890 uye ipapo Tokyo Higher Technical School muna 1901. Vatungamiriri vakawanda vari academia uye maindasitiri vakayambuka mikova munguva yemakore 25 umo Tejima akatungamirira chikoro.
An zvavanoisa akasimuka mumakore ari Tokyo Technical School. “Pose pane chimbini, ikoko uchawana mumwe kubva Kuramae,” zvichireva kuti pose paiva huru dzinotambudza Industrial kunzwisisa, kudzidza chikoro akanga kuitawo kwayo pakagadzwa. Kuramae akaramba muzinda michina dzidzo kusvikira chikoro chakatsva pasi September 1, 1923 apo Mukuru Kanto Earthquake akarova.
Unoda kurukura Tokyo Institute of Technology ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Tokyo Institute of Technology musi Map
Photos: Tokyo Institute of Technology pamutemo Facebook
Tokyo Institute of Technology wongororo
Join kukurukura pamusoro Tokyo Institute of Technology.
Other mumayunivhesiti muJapan
Keio University Chiyoda-ku